1 taona 11 volana lasa izay #750 by Hykardu
Ity no lahatsary voalohany ao amin'ny seranan'i Hawaii. Ny faniriako handrakitra io sidina io dia hitako rehefa nahita ny sary gtatuito sary tao hawaii-photoreal.com. Tena tantara mampihetsi-po, tena mahatalanjona sy manankarena amin'ny antsipiriany. Arahabaina ny mpiasa ao amin'ny flight-sim-jewels.com ho an'ny asa tsara. Amin'ity fiaramanidina ity dia miala ny XXX any amin'ny nosy Maui izahay, manaloka ilay volkano lehibe eny amoron-dranomasina ary manaraka ny lalan'ny tendrombohitra. Rehefa avy namakivaky ny ranomasina izahay, dia tonga teo amin'ny moron-dranomasina tsara tarehy tao Molokai izahay ary namintina ity lahatsary voalohany ity, mbola eny amin'ny rivotra, mamakivaky ny ranomasina indray mankany Oahu.
Fotoana mamorona pejy: 0.162 segondra